हरेक मामलामा भारतको दृष्टिकोण खोज्नु हाम्रो कमजोरी हो : राजदूत उपाध्याय- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन १९, २०७३ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — हरेक मामला र अवस्थामा भारतको दृष्टिकोण खोज्नु हाम्रो कमजोरी हो । हामीले के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर निर्णय गर्ने र प्राथमिकतामा पार्ने काम हाम्रै हो । हिजोजस्तो हिनताबोध, लघुताभाष राखेर अब चल्नेवाला छैन । आफ्नो घरभित्रको समस्या मिलाउन नसकेर अरुलाई दोषारोपण गरिरहनुको तुक छैन ।
दुई बर्षअघि भारतका लागि राजदूत बनेर गएका दीपकुमार उपाध्यायको पहिलो कार्यकाल १३ महिनाको रह्यो । पूर्ववर्ती सरकारले फिर्ता बोलाएको छ महिनामैं फेरि त्यही कुटनीतिक मुकाममा राजदूत बनेर गएका उपाध्याय यतिखेर काठमाडौंमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन् र राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी चरणमा समन्वय जुटाउन उनी काठमाडौं आएका हुन् । गत बैशाख महिनामा हुने भनिएको राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण आकस्मिक रुपमा स्थगित भएसँगै उपाध्यायलाई बिभिन्न आरोपसहित राजदूत पदबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । अहिले फेरि राष्ट्रपति भण्डारीको अर्को तालिकामा हुन लागेको भ्रमणको समन्वय गर्न उनी काठमाडौंमा व्यस्त रहेका छन् । राजदूत उपाध्यायसँग देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :
हेर्नोस्, हाम्रो अरु कहींकतैसँग तुलना गर्नै नमिल्ने सम्बन्ध भारतसँग छ । संस्कृति, सभ्यता, खुला सिमानाको कुरा मात्रै होइन, भुगोलको साइनोमा पनि हामी उसैगरी जेलिएका छौं । मैंले बुझेसम्म भारतको अभिष्ट भनेको नेपालको शान्ति, स्थिरता र आर्थिक प्रगति नै हो । नेपालमा द्धन्द्ध भएमा, असहज स्थिती उब्जिएमा तेस्रो पार्टी (पक्ष) को उपस्थिती हुनेछ—कुनै पनि नाममा, रुपमा । यो दुबै मुलुकका लागि घातकसिद्ध हुन सक्छ । यो सोचाइ र मनोदशाले कहीं पुगिन्न । हामीले घोषणा गरेको चुनाव गर्ने कि नगर्ने भनेर अरुलाई किन सोधिरहने ? अरुको जवाफको अपेक्षा किन गरिरहने ?
प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७३ १४:०१
देशको आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक : प्रधानमन्त्री
नेपाल लगानी सम्मेलन सुरु
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको र यसको उपयुक्त वातावरण बनाउन सबैको एकमत रहेको बताएका छन् । ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’को आज उद्घाटन गर्दै उनले सरकार वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन हरसम्भव प्रयासमा लागेको बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको र यसको उपयुक्त वातावरण बनाउन सबैको एकमत रहेको बताएका छन् ।
‘नेपाल लगानी सम्मेलन’को आज उद्घाटन गर्दै उनले सरकार वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन हरसम्भव प्रयासमा लागेको बताए ।
शान्ति र समृद्धि एक अर्काका परिपूरक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई वैदेशिक लगानीको गन्तव्य बनाउनका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको उल्लेख गरे ।
राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतिक दलबीचमा सहज अवस्था भएमात्र निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त अवसर हुने बताउँदै उनले नीति तथा नियम एवम् वातावरणलाई उपयुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्रको सहयोगमा लगानी सम्मेलन २०१७ आजदेखि सम्मेलन सुरु भएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्नेलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग सहकार्य गरेर देशका सम्भावित क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिने बताए ।
नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्धनलाई अगाडि बढाउने बताउँदै उहाँले त्यसमा सरकारले पहल गर्ने बताए । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि उपयुक्त अवसर भएको बताउँदै उनले सम्मेलनले नेपालमा लगानीका लागि उभार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
दोस्रो चरणको आर्थिक रुपान्तरणलाई अगाडि बढाएर आर्थिक लगानी र पुँजीलाई सुरक्षित गर्न सकिने बताउँदै सभापति देउवाले निजी क्षेत्रलाई प्रथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नीति रहेको जानकारी दिए ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रमुख विपक्षी दलका नेताका रुपमा आफूले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन पहल गर्ने बताए । उनले भने, 'मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ ।'
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि धेरै लगानीका क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरे । उनले सरकारले लगानीका लागि सबै वातावरण बनाउने उल्लेख गर्दै निरन्तर ऊर्जाको व्यवस्था गर्ने र नीतिगत व्यवस्था गर्नेमा आश्वस्त पारे । सरकारले परियोजना बैंक बनाएर लगानी छनोट गर्ने अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीका लागि सबै क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सम्मेलनबाट नेपालले लाखौँ युवाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने सपना पूरा हुने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै अर्थतन्त्रमा उदारता अपनाइएको उल्लेख गर्दै उदार राजनीतिक व्यवस्थासँगै मुलुकका सबै क्षेत्रको रुपान्तरण भएको बताए ।
उनले प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि हुनु र गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको र त्यसले जनताको जीवनस्तर सुधार हुँदै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको बताए ।